တရုတ် ၈ မီလီမီတာ Abalone Shell Tungsten Carbide လက်စွပ်များကို Unisex မင်္ဂလာဆောင်သင့်၏ Edge Comfort သည်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Ouyan
Guangzhou Ouyuan စက်ပစ္စည်းလက်ဝတ်ရတနာကုမ္ပဏီလီမိတက်
အခြေခံနှင့်ဂန္ထဝင် Tungsten လက်စွပ်
Multi-Facet နှင့်အတူသံထည် Tugnsten လက်စွပ်
Loop & Cut နှင့်အတူ Tungsten လက်စွပ်
မင်္ဂလာဆောင် & ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုခညျြအနှော
အခြေခံမင်္ဂလာဆောင် & စေ့စပ်လက်စွပ်
CZ စိန်မင်္ဂလာဆောင် & စေ့စပ်လက်စွပ်
မင်္ဂလာဆောင် & စေ့စပ်လက်စွပ်အင်းလေး
ဖက်ရှင်သံမဏိလက်စွပ် G ... \_ t
စက်ရုံအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိရိုးရှင်းသော Jawless ...
အဆိုပါစက်ရုံသံမဏိရိုးရှင်းသောရိုးရှင်း Jawless ဦး ခေါင်းခွံ Rin ...
လက်ကားဖက်ရှင်လက်စွပ် Choker ဖော်ပြချက် Silver Stai ...
ကျောက်မျက်ရတနာသံမဏိအပြာရောင် Tone စပျစ်သီးကို Freemason ...
အမျိုးသားစီးသံမဏိလက်စွပ် Spade Ace အနက်ရောင် ... \_ t
အမျိုးသား ၀ တ်နှစ်ကြိုးပါသတ္တုပါအရည်အသွေးမြင့်သားရေ ...
အမျိုးသား ၀ တ်သားရေလက်ကောက်လက်ကောက်အိတ် ...
၈ မီလီမီတာ Abalone Shell Tungsten Carbide လက်ပတ်ကြိုးများသည် Edge သက်သောင့်သက်သာရှိသည်
> ၈ မီလီမီတာ Abalone Shell Tungsten Carbide လက်စွပ်များသည် Unisex မင်္ဂလာဆောင်သင့်၏ Edge သက်တောင့်သက်သာဖြစ်သည်
> တောက်ပသောစိမ်းစိမ်းစိုပြဲနေသောအခွံပါ ၀ င်သည့်ထူးခြားဆန်းကြယ်။ ဖက်ရှင်ကျသည့်လက်စွပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
> အလွန်ကောင်းမွန်သော tungsten carbide ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိသောအတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်သည်သင် ၀ တ်ဆင်သည့်အခါသင့်ကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပါသည်။
> ၎င်းသည်ကတိနှင့်ချစ်ခြင်း၏ခိုင်မာသောကိုယ်စားအလေးထား။ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ မွေးနေ့များ၊ နှစ်ပတ်လည်ပွဲများ၊ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများ၊ ခရစ်စမတ်၊ ပါတီပွဲများနှင့်အခြားအထူးအခမ်းအနားများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
1, ပစ္စည်း: tungsten သံမဏိ
2, အရွယ်အစား: 6mm 8mm အကျယ် 2.3-2.5mm အထူ
3, အလေးချိန်: 0.01kgs
4, အမြောက်အများအထုပ်: opp အိတ်နှုန်း 1pc, ကြီးမားသော opp အိတ်လျှင် 50pcs, ပုံးတစ်ပုံးလျှင် 500-1000 pcs
5, လက်လီအထုပ်: လက်ဆောင်သေတ္တာနှုန်း 1pc
၆။ နီကယ်၊ ခရိုမီယမ်၊ ခဲမဟုတ်သောပစ္စည်းများသည်သင့်ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်မည်မျှကြာကြာဝတ်သည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ။ REACH အစီရင်ခံစာ, ROSH, CE လက်မှတ်။
၇။ Tungsten သံမဏိလက် ၀ တ်ရတနာများ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ - နက်ရှိုင်း။ မြဲမြံခိုင်ခံ့သော၊ မာကျောသော၊ ရိုးရှင်းသော၊ ဤအကြောင်းကြောင့်ယနေ့ဥရောပနှင့်အမေရိကတိုက်တို့တွင် tungsten သံမဏိရတနာသည်လူကြိုက်အများဆုံးလက်ဝတ်ရတနာဖြစ်လာသည်။
၈၊ အခြားပစ္စည်းများ - ကြွေထည်၊ တိုက်တေနီယမ်၊ သံမဏိ၊ သစ်စသည်
၉၊ အခြားအင်းလေးကန် - အန္တာရယ်၊ နဂါး၊ ဖိုင်ဘာ၊ ဥက္ကာခဲများ၊
10, အခြားအရောင်များ: 14K / 18K / 24K ရွှေ / အနက်ရောင် / နှင်းဆီရွှေ၊ အပြာ၊ ငွေရောင်၊
11, အခြားအရွယ်အစား: # 4- # 12 from မှယူအက်စ်အရွယ်အစားသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားကိုလိုက်နာပါ
Guangzhou ouyuan ဟာ့ဒ်ဝဲလက်ဝတ်ရတနာသည် ၁၀ နှစ်အထက်အမျိုးသားလက်ဝတ်ရတနာစက်ရုံများဖြစ်သည်။ လုပ်သား ၄၀ ပါ ၀ င်သည့်စက် ၅၀ ကျော်၊ အရည်အသွေးပြည့် ၀ မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အပြည့်အဝကွင်းများအတွက် ၁၀ QC ရှိသည်။ ဤတွင်9နှစ်စံချိန်နှင့်အတူကွင်းအများအပြားစတိုင်များ။
၂၀၁၀ နှစ်မှစ၍ ရောင်းအားသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ သန်းအထက်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်၊ ဥရောပနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းစသည်တို့တွင်အဓိကဈေးကွက်၊ ခဲ၊ ခရိုမီယမ်၊ နီကယ်မရှိသောကုန်ပစ္စည်းများ၊ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် CE၊
Sliver, ရွှေအပြည့်၊ IPG ဖြင့်ရွှေ၊ သေနတ်၊ အနက်ရောင် (သုံးနှစ်အတွင်းမှေးမှိန်သွားမည်မဟုတ်)
အတွင်းပိုင်းထုပ်ပိုးမှု - ၁pcs / opp အိတ် ၅၀pcs / Foam box, အပြင်အဆင် - 500-1000pcs / carton
DHL, UPS, EMS, FedEx, TNT စသည်တို့
T / T, Western Union, PayPal ။
စမ်းသပ်မှုအရည်အသွေးအဘို့အနမူနာပေးပို့ပထမ ဦး ဆုံးရရှိနိုင်ပါသည်
ထုတ်လုပ်မှုမပြုမီ 100% ငွေပေးချေမှု
ကြိုတင်ငွေ ၃၀% ကြိုတင်ပေးချေပြီးငွေမပေးမီ ၇၀% လက်ကျန်ငွေကိုပေးသင့်သည်
1. နမူနာထိန်းချုပ်မှု, သင်နမူနာအတည်ပြုသည်အထိငါတို့ထုတ်ကုန်အောင်စတင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၃။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မှားယွင်းသောကုန်ပစ္စည်းများအစား ၂ - ၅% ပိုသောကုန်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်မည်။
4. ထုပ်ပိုးထိတ်လန့်နိုင်, damp proof နှင့်တံဆိပ်ခတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
၁။ ဖောက်သည်များကစျေးနှုန်းနှင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်အကြံပြုချက်ပေးသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အလွန် ၀ မ်းသာပါသည်။
၂။ အကယ်၍ မေးခွန်းရှိပါက ဦး စွာအီးမေးလ် (သို့) တယ်လီဖုန်းဖြင့်အကြောင်းကြားပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့အချိန်အတွက်သူတို့အဘို့အကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
၃။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပတ်စဉ်တိုင်းစတိုင်အသစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူသူဟောင်းများထံပေးပို့ပါမည်
၄။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်ကုန်ပစ္စည်းများလက်ခံရရှိပြီးနောက်ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးသွားပါကကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားလျော်ကြေးပေးမည်
ရှေ့သို့ CZ Tungsten Carbide Ring 8mm Polished Beveled Edge Matte Brushed Finish Centre မင်္ဂလာဆောင် Band
နောက်တစ်ခု: အမျိုးသား၏သံမဏိလက်စွပ် Spade Ace အနက်ရောင်ငွေစပျစ်သီးပြွတ်
Tungsten Carbide ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
tungsten mens ကွင်း
၆ မီလီမီတာ ၈ မီလီမီတာ EKG နှလုံးခုန်လက် ၀ တ်စုံငွေရောင် ...
အမျိုးသား၏ ၈ မီလီမီတာရွှေကာဗွန်အချစ် Tungsten Carbi ...
၂ မီလီမီတာတိုက်တေနီယမ်သံမဏိရိုးရှင်းသောရိုးရိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်း ...
3 Layer Cuff လက်ကောက်သံလိုက်သံမဏိပန့်ခ်စတိုင် ...
၆ မီလီမီတာ ၈ မီလီမီတာသက်တန့်တိုက်တေနီယမ်ကွင်းရောင်စုံသင်း ...
၆ မီလီမီတာ ၈ မီလီမီတာ Steampunk Gear Wheel အပြာရောင်ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ ...
အမျိုးသားများအတွက် ၆၀၀ မီလီမီတာ Celtic Titanium Rings ...
၆ မီလီမီတာရွှေနှင့် ၁၈ ကာရက်ရွှေကြိုးကြိုး Matte Poli ...
၆ မီလီမီတာ ၈ မီလီမီတာအနက်ရောင် Tungsten Carbide Ring Matte Brush ...
ဒီနေ့ငါတို့နှင့် busienss ဆက်ဆံရေးထူထောင်လိုပါသလား?
အခန်း ၁၀၁၅၊ Jinyan အဆောက်အအုံ၊ Tianhe ခရိုင်၊ Yantang လုပ်ငန်း
အနက်ရောင် tungsten ယောက်ျားရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခညျြအနှော, Tungsten လက်စွပ်, အဖြိုက်နက် titanium လက်စွပ် 8mm, Tungsten လက်စွပ်အရွယ်အစား 15, မင်္ဂလာဆောင်လက်စွပ်စိန်နှင့်ရွှေ, အနက်ရောင် Tungsten အမျိုးသားလက်စွပ်,